Echiche 12 iji mee ka ọdịiche dị na ọdịnaya gị | Martech Zone
Sunday, November 22, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
M hụrụ eziokwu ahụ n'anya na ndị na - agụ akwụkwọ anyị na-arapara n'ahụ anyị n'agbanyeghị na anyị anaghị emepụta ihe okike. Idozi na ibiputa otutu ihe omuma ihe na enyere aka ime ka ndi mmadu bi iche na ndi ozo - ma anyi agabigaghi nke ahu. Nke anyi usoro nyocha ajụjụ Podcast na ndị isi ahịa bụ otu mgbalị.
Imirikiti ihe kpatara anyị ji arapara na ọdịnaya ederede dị nkenke bụ site na arụmọrụ. Anyị nwere ọtụtụ isiokwu iji dee maka na ọ bụghị ọtụtụ akụrụngwa. Ihe omuma ihe omuma a sitere na Oracle bu ihe n’enye m ikike inweta ihe kariri. Ihe omuma, Ebumnuche Azụmaahịa dị egwu nke 12 (Nke ahụ abụghị Blog Posts), na-enye ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ maka ịdị iche na ọdịnaya gị.
ajụjụ - Dee ọdịnaya gị dị ka ajụjụ.
Twitter - Hapụ ọdịnaya na chunks na Twitter.
chaatị dị iche iche - Dị iche na ọdịnaya gị na eserese pụrụ iche.
Ileba Ọmụmụ - Chakwasa ihie a ahịa na ịkọrọ a ikpe ikpe.
Ihe ọchị - Dee ọdịnaya gị na ihe nkesa ọdịnaya dị mfe.
Ozi ederede - Jụọ nyocha site na SMS ma kesaa nsonaazụ ya.
Series - Dee usoro ihe otutu ka ndi folks na-alaghachi.
Share - Idozi na ịkekọrịta ọdịnaya na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ dị ka Pinterest.
Ajụjụ Ọnụ - Jiri usoro nyocha a na-aza ajụjụ ma kesaa nzaghachi site na ndị ọkachamara ..
Pụrụ iche - Gbalịa ụdị dị iche iche, ihe ngosi igwe na usoro mmekọrịta iji mee ndị na-agụ ya.
Ndepụta Nkọwa - Dee ntuziaka ma ọ bụ nkọwa okwu (ma debe ya ruo oge!).
Anyị na-enwekwa mmasị ịkekọrịta ọdịyo, vidiyo, nyocha akụkọ na akwụkwọ ọcha, yana - n'ezie - infographics. Kedu ụdị echiche azụmaahịa ndị ọzọ ị nyochara nke rụpụtara nke ọma? Na-eche free ikwu na ịkekọrịta!
Tags: ikpe ọmụmụchaatị dị iche ichena-atọ ọchị ibeihe di n’imeechiche ịre ahịa ọdịnayausoro ọdịnayaNdụmọdụ ọdịnayaokwunkowaeduziAjụjụ ọnụPinterestajụjụusoroshareozi ederedeTwitterọhụrụ